Mogadishu Journal » Muxuu Madaxweynaha cusub ee Puntland ka yiri Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada
Muxuu Madaxweynaha cusub ee Puntland ka yiri Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada
Mjournal :-Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyay Telefishinka BBC Somali kaga hadlay arrimo kala duwna oo quseeya Federaalka iyo muranka iyaga iyo Somaliland.
Saciid Deni ayaa sheegay in Somaliland ay ku soo xadgudubtay dhulka Puntland, isagoo ugu baaqay inay dib ugu laabtaan goobahooda.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa sheegay in dhisida nidaamka Federaalka ay Puntland qeyb ka aheyd, isla markaana naf iyo maal kaga baxay, waxaa uu xusay inay sii xoojin doonaan.
Waxaa uu sheegay in dalka uu ku jiro Marxalad dib u dhis ah, isla markaana Dastuurka uu qabyo yahay, lagana soo baxay nidaam dowlad dhexe, haatan la galay nidaamka Federaalka, isagoo xusay inay ka shaqeynayaan shuruucda lagu hagi lahaa, isagoo xusay in arrinata jira aanay khilaaf aheyn, balse ay tahay aragti duwanaan.
Mar la weydiiyay arrinta dhismaha Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo ay horay uga baxeen Hirshabeelle ayuu sheegay in dastuurka uu dhigayo in Maamul goboleedyada is kaashadaan, danahooda ka shaqeeyaan, wax kasta oo dastuurka dhigayo ay ku dhaqmi doonaan sida uu yiri.
Hadalka Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa durba muujinaya in Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo sanadkii 2017 la aas aasay uusan waxba iska bedeli doonin.
Shir looga hadlayo ka hor-tagga Qaraxyada oo Muqdisho laga furay
Faahfaahin duqeyn ka dhacday Baay